Dowlada Eriteria oo soo dhaweysay Warbixinta gudiga ilaalinta hubka ee QM – SBC
Dowlada Eriteria oo soo dhaweysay Warbixinta gudiga ilaalinta hubka ee QM
Safiirka Dowlada Eriteria u fadhiya Qaramada Midoobay Mr Araya Desta ayaa sheegay inuu u arko Warbixintii Qaramada Midoobay ee Arimaha Eriteria mid sax ah oo taasi oo meesha ka saaraysa Tuhun uu caalamka ka qabay in dowladooda ay taageerto xarakada alshabaab ee ka dagaalanta Gudaha Soomaaliya.
Araya Desta ayaa sheegay in ay ka shaqeyn doonan sidii ay madaxda qaramada Midoobay ugala hadlai lahaayeen sidii loo qaadi lahaa cunaqabateynta saran wadanka Eriteria oo taasi oo la saaray ka dib markii eedeymo la been abuuray loo gudbiyay QM sida uu hadalka u dhigay safiirka Eriteria ee QM.
Mr Desta ayaa cuqabateynta QM ee Eriteria ku tilmaamay mid aan cadaalad ahayn isaga oo xusay in markii la saarayay laga soo xigtay dad aan xaqiiqda hayn gaar ahaan arimaha Eriteria waxana uu sheegay in aysan wax xiriir ah ka dhaxeyn Alshabaab Eriteria.
Eedeymaha loo haysto Dowlada Eriteria ayaa waxaa ay socdeen tan iyo intii xaalada Soomaaliya ay ka soo ifbaxeen Dhaqdhaqaaqyada Islaamiga ah oo ay ka mid ahaayeen Midowgii Maxkamadaha Islaamka Soomaaliya kuwaasi oo dowlada Eriteria siweyn loogu loogu xiriiriyay inay xiriir la leedahay islaamiyiinta Soomaaliya.
Bishii November ee sannadkii tagay ayay ahayd markii eedeyntii ugu danbeysay ay dowlada Kenya u jeedisay Eriteria oo ku aadan inay taageero meleteri u dirtay Dalka Soomaaliya gaar ahaan Xarakada Alshabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya waxaana eedaas meesha ka saaray gudiga Monitoringka ee QM.